Home Wararka Al Shabab oo sheegtay inay weerar ku qaadeen Ciidamada Kenya
Al Shabab oo sheegtay inay weerar ku qaadeen Ciidamada Kenya
Warar dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar culus oo dagaal yahano Shabaab ah ay ku qaadeen saldhig Ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ee qeybta ka ah howlgalka Amisom ku leeyihiin deegaanka Kudhaa ee gobolka Jubbada Hoose.
Wararka ayaa intaas ku sii daraya in goobta uu ka dhacay dagaal la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, kaasoo socday mudo ku dhow saacad, iyadoo dhawaqa rasaasta la is weydaarsanayay laga maqlayay qeybo kamid ah deegaanka kulbiyow.
Dadka deegaanka ayaa ku waramay iney jirto khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo ka dhashay dagaalka, iyadoo mararka qaarna la maqlayay qaraxyo u badnaa bambada gacanta laga tuuro.
Kooxda Shabaab oo sheegatay mas’uuliyada ayaa shaacisay in dagaalka ay ku dishay sarkaal ka tirsan ciidamada Kenya, majirto ilo madax banaan oo xaqiinin kara sheegashada kooxdan, iyadoo maamulka Jubaland iyo Kenya toona aysan wali ka hadal dagaalka iyo khasaaraha ka dhashay.
Previous articleYaa ku tartamaya doorashada kursiga HoP#058 ee Baladweyne?
Next articleAmniga dalka oo faraha ka sii baxaya, xili Farmaajo iyo Rooble isugu faanayaa kulamo ciidan
Yariisow oo amar culus dul dhigay shacabka Muqdisho xilli lagu soo...